အာဇာနည်မျိုးသေရိုးမရှိ: အမေရိကန်မှ မြန့်မာ့သိုင်း
အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ မြန်မာ့ရိုးရာသိုင်းလေ့ကျင့်ရေးကျောင်းတွေ ရှိပါတယ် အကယ်လို့ ထိရောက်တဲ့ ကိုယ်ခံပညာသင်ယူလိုပါက ဆက်သွယ်သင်ယူနိုင်ပါတယ်၊ တကယ်တော့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအတော်များများမှာပါ မြန်မာ့ သိုင်းကိုသင်ယူနိုင်ပါတယ်၊
အမေရိကန်ကို မြန်မာ့ သိုင်းတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ ဗန်ဒို ကိုယ်ခံပညာစတင်ရောက်ရှိလာတာ ၁၉၆၀ ခုနှစ်လောက်ကဖြစ်ပါတယ်၊ ဆရာကြီး ဒေါက်တာ မောင်ကြီး က ၀ါရှင်တန်ဒီစီ မှာ ဟံသာဝတီဗန်ဒို စနစ်ကို စတင်သင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်၊ အခုအချိန်မှာ သိရသလောက်ကတော့ အိုဟိုင်းအိုး၊ အနောက်ဗာဂျီးနီးယား၊ ၀ါရှင်တန်ဒီစီ၊ နယူးယောက်တစ်ဝိုက် နဲ့ အခြားစတိတ်အချို့မှာ သင်တန်းကျောင်းတွေ ရှိပါတယ်၊ သူတို့ကျောင်းတွေမှာ ဆရာတွေကို မြန်မာလို ဆရာလို့ဘဲ ရှေ့ကတပ်ပြီး ခေါ်ကြ ပါတယ်၊
အောင်မြင်တဲ့သင်တန်းကျောင်းတွေထဲမှာ Advanced Fighting System (Thaing.net လောလောဆယ်တော့ အဲ့ဒီဝက်ဆိုက်ပြင်နေတယ်) ကတော့ အောင်မြင်တဲ့ဖိုက်တာ တွေမွေးထုတ်ပေးနေပြီးနာမည်ကြီးတယ်၊ သူကတော့ MMA ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ၀င်ပြိုင်လေ့ရှိပြီး ဒေသတွင်းချန်ပီယံတွေ အတော်များများရှိတယ်၊ သူတို့သင်တန်းကျောင်းကတော့ အမေရိကန် ဗန်ဒို အသင်း အဖွဲ့ဝင် မဟုတ်ဘူး၊ သင်တန်းထူထောင်တဲ့ ဆရာဖေး ရဲ့အဖိုးကမြန်မာပြည်မှာ နေခဲ့ပြီး သူတို့သိုင်းကတော့ ကချင်ပုံစံ ကို အခြေခံတယ်လို့ဆိုပါတယ်၊ Phil ကသူရဲ့သင်တန်း အကြောင်းရှင်းပြထားတာကြည့်နိုင်ပါတယ်၊
သူ့ဆီမှာ နှစ်ပေါင်းတစ်ရာကျော်က ဓားအချို့အခုထိသိမ်းထားတာရှိပါတယ်၊ ဟိုတစ်လောတုန်းကတော့ လူတစ်ယောက်ကို သိုင်းသင်မပေးနိုင်ဘူးလို့ ငြင်းလိုက်လို့ လူတန်းစားခွဲခြားမှု့နဲ့ သူတရားရုံးမှာ အမှုရင်ဆိုင်လိုက်ရပါသေးတယ်၊ ဖြစ်ပုံက သိုင်းလာသင်တဲ့သူက သူ့ကိုဖမ်းတဲ့ရဲကို ပြန်ဆော်ခြင်လို့ပါတဲ့၊ အဲဒီရဲ အရာရှိကလည်း သူတို့ကျောင်းမှာဘဲ သိုင်းလာသင်နေတဲ့သူဖြစ်နေလေတော့ အတော်ရှင်းလိုက်ရသေးတယ်တဲ့၊ နောက်တော့အမှုနိုင်သွားလို့တော်သေးတယ်၊
အမေရိကန်အထူးတပ်ဖွဲ့တွေ၊ လုံခြုံရေးအရာရှိတွေ ကို အဓိကသင်ပေးနေတဲ့ကျောင်းကတော့
Way of the Warrior လို့အမည်ပေးထားတဲ့ Bando System သင်တန်းကျောင်းဖြစ်ပါတယ်၊ သူတို့ဆီကလည်း နာမည်ကြီးဖိုက်တာတွေမွေးထုတ်ပေးပါတယ်၊ သူတို့ရဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ကိုးကားထားတဲ့ဆောင်ပုဒ်တစ်ခုကတော့ ၁၉၁၀ ခုနှစ်က အမရပူရဆရာတော်မိန့်ခဲ့တာပါ "No system is completely unique. No system is completely independent from external and internal influences. Every system evolves over time by integration, modification and restructuring, resulting in what we then call "uniqueness." Overtime, this unique system will also change."
Greater Hartford Bando ကျောင်း၊ မြောက်ဗာဂျီးနီးယား ကျောင်း၊ နယူးအင်္ဂလန် ဘန်ဒို ကလပ် စသည်ဖြင့်ရှိပါတယ်၊
နောက်ပြီး ပြင်သစ်ပြည်မှာလည်း ဗန်ဒို ကို အတော်လေ့လာသင်ယူကြတယ်လို့ သိရပါတယ်၊ တခြားနိုင်ငံတွေအတော်များများကတော့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီး နိုင်ငံတကာအဖွဲ့ ဖွဲ့ထားကြပါတယ်၊ တချို့ကလည်း သီးခြားပုံစံနဲ့ သင်ကြတာရှိပါတယ်၊
ဘာဘဲပြောပြောတစ်ခုသတိထားမိတာကတော့ Wikipedia မှာ Bando ဆိုပြီး ရှာကြည့်ရင် သရုပ်ပြတဲ့လူတွေက မြန်မာတွေမဟုတ်ဘဲ ဖြစ်နေတာပါ၊
အမေရိကန်ဗန်ဒို သင်တန်းကျောင်းတွေမှာ ဗန်ဒိုရဲ့ အခြေခံကျင်စဉ်တွေနဲ့ အဓိက ပုံစံ ၉မျိုးဖြစ်တဲ့ Bull, Boar, Cobra, Viper, Python, Panther, Tiger, Scorpion နဲ့ Eagle ပုံစံတို့ကို လည်း အထူးပြု့သင်နိုင်ပါတယ်၊ ဒီလိုသင်ကြားတဲ့နေရာမှာ လည်း မိမိနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ပုံစံကို ရွှေးချယ်ပြီးသင်ယူမှ ပိုပြီးအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်၊ ဥပမာ လူထွားကြီး တစ်ယောက်ကို သင်တဲ့ ပုံစံနဲ့ ခပ်သေးသေးလူတစ်ယောက်ကို သင်တဲ့ပုံစံမတူပါဘူး၊ လူထွားကြီးအနေနဲ့ Bull စတိုင် Boar စတိုင် တို့ ကိုသင်ယူလေ့ကျင့်မှ သာပိုမိုထိရောက်အောင်မြင်နိုင်ပြီး၊ ခပ်သေးသေးလူတစ်ယောက်အနေနဲ့တော့ Scorpion တို့ Eagle စတိုင်တို့ သင်ယူသင့်ပါတယ်၊ အမှန်ကတော့ အခြေခံ ဗန်ဒိုလေ့ကျင့်ခန်းတွေ ပြီးသလောက်ရှိမှ မိမိဆရာနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး ကိုက်ညီတဲ့စတိုင်ကို ရွေးချယ်ပြီးဆက်လက်လေ့ကျင့်သင့်ပါတယ်၊ နောက်ပြီး မိမိရဲ့ စိတ်နေသဘာဝကလည်း သိုင်းသင်ယူ လေ့ကျင့်တဲ့နေရာမှာ အရေးပါ ပါတယ်၊ စိတ်ဆတ် စိတ်တိုလွယ်တဲ့လူအတွက် တစ်မျိုး စိတ်ရှည်တဲ့လူအတွက်တစ်မျိုး လေ့ကျင့်ခန်းတွေရှိနိုင်ပါတယ်၊ နောက်ပြီး မိမိ ကအသတ်အပုတ်မှာ အလွန်လက်မြန်တဲ့လူလား လက်ဦးမူယူပြီး စတင်တိုက်ခိုက်တတ်သူလား ဒါမှမဟုတ် ရန်သူက စတင်တိုက်ခိုက်လာချိန်မှာ ရန်သူရဲ့ တိုက်ခိုက်လာပုံ အရ တန်ပြန်တိုက်ခိုက်တတ်သူလား ဆိုတာလည်း အရေးပါတဲ့ အချက်ဖြစ်ပါတယ်၊ စသည်ဖြင့် မိမိအကြိုက် အပြင် မိမိနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ပုံစံကို ဦးတည်လေ့ကျင့်နိုင်ပါတယ်၊
ဗန်ဒို အခြေခံ ပညာတွေကို တစ်နှစ်လောက်လေ့ကျင့်ပြီး အဆင့်တစ်ခုရောက်မှ သာ တုတ်၊ဓား စတဲ့လက်နက်ပညာ ကို စတင်လေ့ကျင့် နိုင်ပါတယ်၊ ဒီနေရာမှာ ဗန်ဒို ကလက်နက်မဲ့ ကိုယ်ခံပညာကို အခြေခံထားပြီး၊ ဗန်ရှည်ကတော့ လက်နက်နဲ့တိုက်ခိုက်တာကို အဓိကထားပါတယ်၊ နောက်ပြီး လက်ဝှေ့၊ နပန်း၊ သိုင်းပြောင်ပြန်၊ ဘုန်းကြီးသိုင်း စသည်ဖြစ်ရှိပါသေးတယ်၊
အမေရိကန်မှာတော့ ဗန်ဒိုမှာ ဂေါရခါးဓားကောက် နဲ့ တိုက်ခိုက်တာကိုပါထဲ့သွင်းလေ့ကျင့်ပါတယ်၊ အမှန်တော့ ဂေါရခါးဓားကောက်နဲ့ဆင်တူတဲ့ ဓားမြှောင်ပုံမျိုး မြန်မာစတိုင်မှာရှိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဗြိတိသျှ စစ်တပ်က ဗန်ဒိုကို စစ်တပ်ရဲ့ တိုက်ခိုက်ရေး ပညာအဖြစ် လေ့ကျင့်ခဲ့ပြီး ဂေါရခါးလူမျိုး အရာရှိတွေက ဦးဆောင်ပြီးစနစ်တကျ ဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်၊ ဒါနဲ့ ဂေါရခါးဓားကောက်က အင်တာနေရှင်နယ် ဗန်ဒို လေ့ကျင့်ရေးမှာ ပါလာပါတယ်၊
ဗန်ဒို ပညာက ရှေးမြန်မာတွေရဲ့ တိုက်ခိုက်ရေးပညာရပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ဒီပညာတွေနဲ့ တိုင်းပြည်ကို တည်ထောင် ကာကွယ်ခဲ့သလို၊ အခြင်းခြင်း ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြပါတယ်၊ ဒီတော့ ဒေသအလိုက် သိုင်းပညာတွေဟာ ကွဲလွဲမှုရှိခဲ့ကြပြီး၊ အချို့ပညာရပ်တွေကတော့ ကွယ်ပြောက်သလောက်ရှိနေပါပြီ၊ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ မိမိအဖွဲ့ရဲ့လျို့ဝှက်တိုက်ကွက်ကို ဆွေမျိုးသားခြင်းလူရင်းတွေကို သာသင်ပေးလေ့ရှိခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်၊ ဒီလိုမှ မဟုတ်ရင် တစ်ဖက်က မိမိတိုက်ကွက်ကို သိသွားပြီး တန်ပြန်တိုက်ကွက် ဖော်ထုတ်တိုက်ခိုက်လာမှာဖြစ်လို့ပါ၊ ဗြိတိသျှခေတ် အတွင်းမှာလည်း အရပ်ထဲမှာ ကိုယ်ခံပညာလေ့ကျင့် ခွင့်ကို တင်းကြပ်ပိတ်ပင်ထားခဲ့ပါတယ်၊ သိုင်းလေ့ကျင့်သူကို သူပုန်ထမည့်သူလို့သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်၊ ခေတ်အဆက်ဆက် မှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်မြန်မာ့ သိုင်းပညာများဟာ ကြီးထွားသင့်သလောက်ကြီးထွားခွင့်မရခဲ့ ပြန်ပါဘူး၊ အခုခေတ်မှာ လည်း မြန်မာပြည်မှာတောင် ရိုးရာသိုင်းသင်ဖို့ဟာ မလွယ်ကူပါဘူး၊ ခေတ်စားပြီး လက်တွေ့မကြတဲ့ အားကစားကို အခြေခံတဲ့ နိုင်ငံခြားက ကိုယ်ခံပညာတွေက မြို့ပေါ်မှာ နေရာရနေကြပါတယ်၊
ဘာဘဲပြောပြော မြန်မာ့သိုင်းပညာကို နိုင်ငံတကာမှာ ပြန်လည်ထွန်းကားလာတာကို တွေ့ရတော့ အလွန်ကို အားရမိပါတယ်၊ နောက်ဆိုရင် မြန်မာတွေ နိုင်ငံခြားမှာ နိုင်ငံခြားသားဆရာတွေနဲ့ မြန်မာ့သိုင်းကို ပြန်သင်နေရမှာလည်း စိုးရိမ်မိပါတယ်၊ အဲ နိုင်ငံတစ်ကာမှာ တော့ မြန်မာ့သိုင်းကို သင်ခြင်ရင် ငွေကြေးအတော်အတန်ရှိမှဖြစ်မှာပါ၊ သိရသလောက်ကတော့ မြောက်ဗာဂျီးနီးယားဘက်မှာ ဗန်ဒိုသင်တဲ့ အမေရိကန်ဆရာတစ်ယောက်က ကိုယ့်ဟာကိုလူစုပြီးသင်ချင်သူတွေ၊ သီးသန့်သင်ယူလိုသူတွေအတွက် တစ်ချိန်သင်ခ ဒေါ်လာ ၂၅၀ ယူတယ်လို့သိရပါတယ်၊
ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင် ကျွန်တော်ငယ်ငယ်က ရိုးရာ သိုင်းပညာကို
အဆင့်တစ်ခုထိ တတ်အောင်မသင်ခဲ့ရတာ ကို နှမြောမိသည်၊ ဆရာနဲ့လည်းတွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ပေမယ့် ထိုးတတ်ကြိတ်တတ်ရုံလောက်ဘဲသင်ခဲ့ရသည်၊ အင်း..နောက်ပြီးအဖွား မကြိုက်တာလည်းပါသည်၊ အကိုကတော့ သိုင်းဆရာကြီးတစ်ယောက်ကို အိမ်ကိုခေါ်လာပြီး ငှက်ပျောပွဲအုန်းပွဲတွေ ပြင်ပြီး ခြံဝင်းထဲမှာ အမှန်အကန်သင်ဖို့လုပ်ဖူးသည်၊ နောက်တော့ အဖွားရဲ့တုတ်သိုင်းကို မယှဉ်နိုင်တာနဲ့ အကိုရော သိုင်းဆရာကြီးရော တစ်ခြား ကိုနေရာရွှေ့သွားရသည်၊ အဖွားချစ်တဲ့ ကျွန်တော်ကတော့ အဖွားမကြိုက်တာမလုပ် ပါဘူးဆိုပြီးအိမ်မှာဘဲကျန်ခဲ့ဘူးသည်၊ နောက်တော့ သူငယ်ချင်း ကွမ်းခြံမှာ ရွှေဘိုဘက်က ဆရာတစ်ယောက်နဲ့ သိုင်းပြောင်းပြန် သင်ကြပြန်ရော..၊ ဆရာက သူငယ်ချင်းကွမ်းခြံမှာ အလုပ်လာလုပ်ရင်းနဲ့ ကြုံလို့ သင်ဖြစ်ကြတာ..၊ နောက်တော့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် သိုင်းသင်တာ တစ်ခန်းရပ်သွားပြန်ပါတယ်၊
နောက်တခါ ဆရာတစ်ယောက်နဲ့ ထပ်တွေ့ပြန်တယ်..၊ သူကတော့ သိုင်းပညာဆိုတာ သူများဆော်ဖို့ကြီးမဟုတ်ဘူး၊ ခုခံကာကွယ်ဖို့ နောက်ပြီး စိတ်ဓာတ်ကို အရင်ခိုင်အောင်လုပ်ရတယ်ဆိုပြီး၊ တရားထိုင်တာက အစ စံနစ်တစ်ကျသင်ပေးပါတယ်၊ နောက်တော့ ဆရာခင်ဗျာလည်း ဆင်းဆင်းရဲရဲ စီးပွားရေးအဆင်ပြေတာမဟုတ် တော့ တခြားရေကြည်ရာ တစ်နယ်ပြောင်းတော့ ဆက်မသင်ခဲ့ရတော့၊ ဒီလိုနဲ့ နှစ်အတော်ကြာမြို့ရောက်တော့ အလွယ်တစ်ကူလက်လှမ်းမှီတဲ့ ကျောင်းက ကရာတေးကလပ်မှာ ဘဲ ၀င်ကစားဖြစ်ပြီး ရိုးရာသိုင်းနှင့်လုံးဝအဆက်ပြတ်သွားတော့သည်၊ အင်း..အဲ့ဒီတုန်းက ရိုးရာသိုင်းဆရာတွေကိုများ အမေရိကန်ကို ခေါ်လာပြီး ကလပ်ထောင်သင်တန်းပေးလိုက်ရရင် အတော်အဆင်ပြေမှာ သေခြာသည်၊
ကျွန်တော် ဆရာတွေကို ခေါ်လာပြီးသင်တန်းထောင် မယ်ဆိုလို့ မြန်မာအတွေးနဲ့ မသင့်တော်ဘူးလို့တော့ မထင်လိုက်ပါနဲ့အုံး၊ အမေရိကန်မှာ ဘာသိုင်းမှန်းမသိတဲ့ သိုင်းပေါင်းစုံသင်နေတဲ့ ကလပ်တွေကမြို့တိုင်းမှာ အများကြီးရှိတယ်၊ ကလေးကအစ အမျိုးသမီးတွေပါ သင်နေကြတာ..၊ အခုနေတဲ့အိမ်နားမှာတောင် ကလပ်နှစ်ခုရှိတယ်၊ ညနေဘက်တွေနဲ့ အလုပ်ပိတ်ရက်တွေဆို ကားတွေရပ်ထားတာ ကားပါကင်ကွင်းထဲမှာ ပြည့်နေတာတွေ့ရသည်၊ မိမိတို့တိုင်းပြည်က ဆရာတွေခင်ဗျာ ဘာမှမရရှာကြဘဲသင်ပေးနေရတာကို သတိရမိသည်၊ အထောက်အပံ့ပေးမယ့်သူကလည်း များများမရှိကြ၊
အခုခေတ်မှာတော့ မြန်မာ့လက်ဝှေ့ကျော်တွေရဲ့ အစွမ်းကြောင့်နိုင်ငံတကာမှာ လက်ဝှေ့ကိုလူသိပိုများလာကြတာကိုတွေ့ရသည်၊
မြန်မာ လူငယ်တိုင်းရိုးရာသိုင်းပညာကို လက်လှန်းမှီ သင်ယူနိုင်ကြပြီး တန်ဖိုးထား ထိမ်းသိမ်းနိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်ရင်း…
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 12:18 AM Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook